" Stay Homeကာလမှာ မိန်းက​လေးပရိသတ်တွေအတွက် မပျင်းရဘဲ အကျိုးရှိစေမယ့်အရာလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပေးမယ့်အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ'' - Cele Connections
” Stay Homeကာလမှာ မိန်းက​လေးပရိသတ်တွေအတွက် မပျင်းရဘဲ အကျိုးရှိစေမယ့်အရာလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပေးမယ့်အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ”
Candy | 04/10/2020 | Celebrity | No Comments
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ စူးရှနိုင်ရဲ့ အနုပညာနာမည်လေးကတော့ ပက်ထရစ်ရှာ ဆိုတဲ့နာမည်ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရင်ထဲ နေရာအပြည့်ယူထားတဲ့ မင်းသမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ လိုက်တဲ့ ဘိုဆန်ဆန် မျက်နှာပေါက်ဆန်းဆန်းလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ အထူးသတိထားမိလာတဲ့ မင်သမီးလေးဆိုလည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
ငယ်စဉ်တည်းက အနုပညာနဲ့မစိမ်းတဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပါရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ချစ်စနိုးနဲ့ရှာရှာလို့ ခေါ်​လေ့ရှိကြပါသေးတယ်။ ရှာရှာကတော့ လှပပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အပြင် ရှတတ အသံလေးနဲ့ အမျိုးသားပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူလေးပါ။
အခုလို Covid ကာလ Stay Homeနေနေကြတဲ့အချိန်မှာ ” Hello!! Good evening ပါStay Home နေရလို့ ပျင်းနေကြပြီလား??? ☺️
♥️ အသဲလေးတို့အတွက် သတင်းကောင်းလေး လာပြောပြပေးမလို့…အိမ်မှာပျင်းမနေရအောင် ရှာရှာနဲ့အတူ Make Up တူတူလိမ်းကြည့်ကြမယ်လေနော် 😍အားလုံးပဲ Stay Home, Stay Pretty ပါ”ဆ်တဲ့စာလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေမပျင်းရအောင်Liveလွှင့်ကာ Make upလိမ်းပြမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
” Stay Homeကာလမှာ မိနျးက​လေးပရိသတျတှအေတှကျ မပငျြးရဘဲ အကြိုးရှိစမေယျ့အရာလေးတဈခုကို ပွုလုပျပေးမယျ့အကွောငျး ပွောလာတဲ့ ပကျထရဈရှာ”
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ စူးရှနိုငျရဲ့ အနုပညာနာမညျလေးကတော့ ပကျထရဈရှာ ဆိုတဲ့နာမညျဆနျးဆနျးလေးဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေငျထဲ နရောအပွညျ့ယူထားတဲ့ မငျးသမီးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။နာမညျဆနျးဆနျးလေးနဲ့ လိုကျတဲ့ ဘိုဆနျဆနျ မကျြနှာပေါကျဆနျးဆနျးလေးကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အထူးသတိထားမိလာတဲ့ မငျသမီးလေးဆိုလညျး မှားမယျမထငျပါဘူးနျော။
ငယျစဥျတညျးက အနုပညာနဲ့မစိမျးတဲ့မငျးသမီးလေးဖွဈပွီးအခုခြိနျမှာရုပျရှငျဇာတျကားတှပေါရိုကျကူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေတော့ခဈြစနိုးနဲ့ရှာရှာလို့ ချေါ​လရှေိ့ကွပါသေးတယျ။ ရှာရှာကတော့ လှပပွပွေဈတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျး အပွငျ ရှတတ အသံလေးနဲ့ အမြိုးသားပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျထားနိုငျသူလေးပါ။
အခုလို Covid ကာလ Stay Homeနနေကွေတဲ့အခြိနျမှာ ” Hello!! Good evening ပါStay Home နရေလို့ ပငျြးနကွေပွီလား??? ☺️
♥️ အသဲလေးတို့အတှကျ သတငျးကောငျးလေး လာပွောပွပေးမလို့…အိမျမှာပငျြးမနရေအောငျ ရှာရှာနဲ့အတူ Make Up တူတူလိမျးကွညျ့ကွမယျလနေျော 😍အားလုံးပဲ Stay Home, Stay Pretty ပါ”ဆျတဲ့စာလေးနဲ့ ပရိသတျတှမေပငျြးရအောငျLiveလှငျ့ကာ Make upလိမျးပွမယျ့အစီအစဥျလေးကိုပွောပွခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ CeleConnections ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Middle Weight Champion ရွှေခါးပတ်ကြီးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်အတွက် အားပေးစကားပြောလာတဲ့ အောန်ဆိုင်း
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပိတ်ထားရတဲ့ ဘုရား​စေတီအတွက် မီတာခသိန်းချီကျခဲ့တာကြောင့် မှန်းခြေနဲ့ အကုသိုလ်မယူဖို့ပြောလာတဲ့ ကျော်သူ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းဝေဖန်သူတွေကို လက်မခံစွာနဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ လိမ္မော်သီး